အနီထဲမှ ကြယ်ဖြူတစ်ပွင့် -‌ ဆောင်းပါး… – PVTV Myanmar
· 8 months ago ·19 Comments
အနီထဲမှ ကြယ်ဖြူတစ်ပွင့် -‌ ဆောင်းပါး
Like – 15K Share – 2586
Paing Gyi says:
2021-05-31 at 6:10 PM
ညာဘက်ဆံုးက အလံအကြောင်းလည်း ဆောင်းပါးရှိရင် ရနိုင်မလားဗျ
2021-05-31 at 7:27 PM
ညီမတို့မိသားစုအဆင်မပြေထမင်းစားဖို့တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေလို့ပါ တစ်နပ်စားလိုက်2ရက်3ရက်ငတ်လိုက်နဲ့ မမှန်ပါဘူး အလုပ်မရှိတာကြာပါပြီ…
အစ်ကိုတို့ အစ်မတို့ wavemoney & kbzpay ထဲကအစွန်းထွက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကူညီပေးကျပါလို့တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လှူဒါန်းချင်လဲရပါတယ် 🙏🙏🙏
Chocho San says:
2021-05-31 at 9:10 PM
Matt Threw says:
2021-06-01 at 8:35 PM
နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ်ထက်ဆိုးတဲ့၊ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ထက်ဆိုးတဲ့ – မအလ ဖက်ဆစ် အကြမ်းဖက် လူသတ်တပ်- အင်္ဂလိပ်ကော ဂျပန်ကော သခင်အောင်ဆန်းကို ဖမ်းမရလို့ သခင်အောင်ဆန်းအမေ ဒေါ်စုကို မဖမ်းဘူး။ မအလ အကြမ်းဖက်တပ်က သားကိုဖမ်းမရရင် အမေကိုဖမ်း ထောင်ချတယ်၊ အစ်ကိုကို မဖမ်းရရင် ညီကိုဖမ်းတယ်၊ အဖေကို ဖမ်းမရရင် မိသားစုဝင်တွေကိုဖမိးတယ်၊ ဆန့်ကျင်မိတာနဲ့ ၅၀၅ နဲ့ဖမ်းတယ်။ အမေစု (၅)နှစ်တာကာလမှာ တောင် ဘယ်လောက်တောင် မနာလိုစိတ်နဲ့ အကုသိုလ်စိတ်ကြီးမားနေမလဲ ရှင်လျှက်နဲ့ ငရဲကျနေတဲ့ မအလနဲ့ အပေါင်းအပါများ… အမြန်ဆုံး ကျဆုံး ကျရှုံးကြပါစေ ..
U Zwê Náiñĝ Liñń says:
2021-06-02 at 9:17 AM
“ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် ´´
2021-06-04 at 8:51 AM
2021-06-04 at 12:36 PM
2021-06-05 at 4:21 PM
မိုး စက္ says:
2021-06-06 at 6:21 PM
NayWin N W says:
2021-06-06 at 9:07 PM
2021-06-06 at 10:12 PM
2021-06-06 at 10:29 PM
ျမနွင္း လူိင္ says:
2021-06-07 at 6:44 PM
ေနာ္မုိင္ ကုိေယာ says:
2021-06-08 at 10:47 PM
လမ်းဆုံက. ဘာညာ ..ဂျမ်းဘုံ ​ကိုလည်း ..ချစ်သောအကြောင်း.. ပြောမိမှာနော်…နင်လေး..သိပ်ချော…တာပဲ….
2021-06-09 at 12:26 PM
အမေရခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်တာကာလဟာလည်းရွှေရည်စိမ် ဒီမိုကရေစီပါ
Khin Cho Khing says:
2021-06-09 at 7:48 PM
Daw Lay says:
2021-07-26 at 10:48 PM
K KhAi says:
ကျန်တဲ့ ဖတပလ များ တောခိုသွားကြလေသတည်း